Chelsea oo dalab layaab leh u dirtay Xiddiga Jamie Vardy. | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Chelsea oo dalab layaab leh u dirtay Xiddiga Jamie Vardy.
(22-8-2017) Kooxda kubada Cagta Chelsea ayaa lasheegayaa in ay dalab layaab leh u dirtay Weeraryahanka kooxda Leicester City ee Jamie Vardy. kaas oo uu doonayo Macalin Antonio Conte in uu la soo Wareego.
Chelsea oo u muuqata mid weli suuqa ka baadi Goobeysa badalka Weeraryahanka dalka Spain ee Diego Costa ayaa markaan lasheegayaa in ay si qar iska tuurnimo ah dalab ugu dirtay Xiddiga Jamie Vardy.oo 30 Sano jir ah.
Jamie Vardy oo ah Weeraryahan ku wanaagasan dhanka Gool dhalinta ayaa Horay mar loola Xiriiriyey kooxda Arsenal markaas oo lagu hungoobey in uu London u dhaqaaqo balse Chelsea ayaa markaan lasheegayaa in ay doonayaan in ay soo qaataan si uu u buuxiyo dhibaatada dhanka Weerarka ka haysata.